true targets /zu-ZA/tools-for-life/targets/steps/administrative-scale.html read 2 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/targets_zu_ZA.jpg Ama-Targets kukanye nemiGomo
Ukuze umuntu noma iqembu lifinyelele kumgomo, okokuqala kufanele kwazeke izisekelo eziphathelene ngokuhlela. UkuHlela kusho izindlela zokulungisa izinto nezenzo ukuze kulethwe lokho okufunwa ngumuntu noma iqembu.
Isitatimende esilula ngokuhlela ukuthi sinenjongo yokwenza ukuhlela kube iqiniso. Into eyiqiniso yinto yangempela, hhayi into esemcabangweni womuntu kuphela.
Ukuhlela akulona uhlelo lwenkohliso olungenanjongo -lokho kuwukuphathwa kwabantu yizisebenzi zikahulumeni. ukuphathwa yizisebenzi zikahulumeni uhlelo oluyinkimbinkimbi lwemithetho nezinqubo ngaphakathi kweqembu elivumela abantu ukuthi bagweme ukuzibophezela futhi livimbele izinto ekutheni zenziwe. Abantu bazozama ukuqeda amaqembu nohulumeni abanjena ngoba baletha kuphela izinto ezinjengokukhiqizwa okwehlisiwe, izintela eziphakeme kanye nolawulo oluningi olungena endleleni yalabo abazama ukukhiqiza.
Futhi, ukuhlela akuyona nje indlela yokuthi abanye abantu bazame ukubaluleka ukwedlula abanye abantu. Uma lokho kwenzeka, kungagcina kuvimbe labo abazama ngokweqiniso ukuhlela umsebenzi ukukhulisa umkhiqizo.
Esikhundleni salokho, ukuze ibe wusizo futhi ihlale isikhathi eside, i-organization kufanele ingene encazelweni yokwenza ukuhlela kube iqiniso.
Yize abaholi abanobubi abambalwa kakhulu bamaqembu nezinhlangano abafuni ukuthuthukiswa kubantu babo, iningi labantu bonke emaqenjini, izinhlangano kanye nohulumeni bafuna izimo ezithuthukisiwe zezindawo zabo. Izibonelo ezinjengalezi zingafaka ukudla okuthe xaxa, ukukhokhelwa okwengeziwe noma izakhiwo ezinhle ekuhlaleni kuzo nasekusebenzeni kuzo. Empeleni, ukuthuthuka kusho okuningi futhi okungcono kakhulu kwalokho umuntu acabanga ukuthi kuzoba kuhle futhi kube wusizo kuye nakumndeni wakhe, njengemfundo engcono nemisebenzi, izindawo ezihlanzekile zokuhlala kanye namapaki amahle izingane ezidlala kuwo. Lokhu kufaka nokuncane kwalokho okuvame ukubonwa njengokubi, njengempi, ubugebengu nezidakamizwa.
Izinhlelo abantu abaningi abazamukelayo nabazisekelayo zihlanganisa okuningi kokuhle nokungaphansi kokubi. “Ukudla okwengeziwe, izifo ezimbalwa,” “izakhiwo ezinhle kakhulu, izindlu ezimpalwa ezihluphekile,” “isikhathi esiningi esikhululekile, umsebenzi omncane,” “imisebenzi eminingi emihle, ukuntuleka kwemisebenzi okuncane” kujwayelekile ezinhlelweni ezibalulekile nezamukelekayo.
Kepha ukuba nohlelo kuphela kusengasho ukwehluleka. Kuzo zonke izinhlobo zezizathu, izinhlelo zingahluleka ukufinyelela izinhloso zazo. Uhlelo lukhulu kakhulu. Akuvamile ukuthi kucatshangwe njengokufiselekayo. Akudingeki nhlobo. Kungazuzisa abambalwa kuphela. Lezi zingabonakala ziyizizathu zokuthi kungani izinhlelo zingenziwanga. Kepha isizathu sangempela ukuntula kolwazi olu-organizational.
Noma ngabe uhlelo lwalulukhulu kakhulu noma lwamukeleka kwabanye kuphela, noma lwalungadingeki, lwalungenziwa. Noma yiluphi uhlelo lungenziwa futhi lulethe lokho okufanele uma ngabe luhlelwe kahle.
Akukhona ukuthi amaphupho abantu awalungile ngokwanele. Kungukuthi abantu abahlali benalo lonke ulwazi lokuthi kudingeka ini ukufezekisa lawo maphupho.
Izinto okufanele zisingathwe ukuphatha kahle (izinyathelo ezibandakanya ukuphatha noma ukuhlela ihhovisi, inhlangano noma umsebenzi othile) yilezi ezilandelayo:
1. Ukugcina inkampani ekhona noma izwe liqhubeka.
2. Ukwenza ukuhlela kube iqiniso.
Uma ngabe unezingxenye eziyisisekelo zeqembu, zenhlangano noma zezwe, njengomhlaba, abantu noma izinto zokusebenza, uzodinga uhlelo lokuphatha ukuze ulugcine.
Ngakho-ke (1) no (2) ngenhla uba yikho nje (2) ukwenza ukuhlela kube iqiniso. Ukuhlela okufanele kwenzeke ukugcina inkampani ekhona noma izwe liqhubeka. Futhi akukho nkampani noma izwe eliqhubekayo ngaphandle kokuthi abantu basebenzele ukuligcina likhona. Ngakho-ke izindlela zokuphatha, noma ngabe zilula kangakanani futhi ziyisisekelo, ziyadingeka ukugcina noma yiliphi iqembu liqhubeka.
Lapho lonke uhlelo lokuphatha lulahlekile noma selukhohliwe, okungenzeka ngenxa yempi noma izinguquko kuhulumeni, ngokwesibonelo, lelo qembu lingawa ngaphandle kokuthi olunye uhlobo lokuphatha luthathe indawo yalo.
Ukushintsha inhloko yomnyango noma imenenja noma umbusi kungabhubhisa ingxenye noma lonke iqembu ngoba uhlelo oludala lungaziwa noma lukhohliwe. Kungenzeka lungasasetshenziswa futhi uhlelo olusha aluqondakali. Ukushintshwa kwezikhundla okwenziwa njalo (ukuguqula abantu kusuka emsebenzini owodwa kuya komunye) enkampanini noma ezweni kungagcina lonke iqembu linciphile, lihlakazekile futhi lididekile. Lokho kungenxa yokuthi lokhu kuhlala kushintshwa kushabalalisa noma yiluphi uhlobo lokuphatha okungenzeka lwalukhona.
Ngalezi zizathu, kubalulekile ukwazi isihloko esiyisisekelo sokuhlela.
Noma iqembu lizivikela kuphela enhlekeleleni ethile ebilisongela, iqembu kusamele lihlele. Isibonelo, mhlawumbe isivunguvungu esinamandla silibangise edolobheni, ngakho abaholi bedolobha kufanele bahlele ukuthi bangasiza kanjani abantu ukuthi baphephe. Uma nje uhlelo selwenziwe, kuzofanela ukuthi lusetshenziswe ngokuvula izikole namasonto lapho abantu bangahlala khona kuze kube yilapho isivunguvungu siphelile noma ngokuba nezimemezelo zomsakazo zitshela abantu ukuthi baphume kule ndawo izinsuku ezimbalwa.
Amanye amacebo angaba lula kakhulu. Ngokwesibonelo, lapho amasosha ayizitha ehlasela inqaba (isakhiwo esikhulu esakhiwe ngezindonga eziqinile ukuvikela abantu namasosha). Inqaba kufanele ivikelwe, okubandakanya ukudala nokwenza icebo, noma ngabe kungumyalo nje wokuthi “Dudulelani emuva amasosha ezitha lawa agibela odongeni oluseningizimu.”
Umyalo onjalo uwumphumela wokubheka okulula kakhulu futhi okusheshayo nokuhlelekayo. Ukuvikela udonga oluseningizimu kwenzeka ngohlelo oluthile lokuphatha, noma ngabe kuyizikhulu nje zizwa umyalo futhi ziqhuqha amadoda azo ukuthi abheke kahle udonga oluseningizimu.
Inkampani ekweleta imali eningi nayo kufanele yenze icebo. Icebo layo kumele lixazulule ukuthi babakhokhela kanjani abantu ababakweleta imali. Ngemuva kwalokho kuzofanele babone ukuthi bangabatshela kanjani labo bantu ukuthi imali izobuyiselwa kubo. Lolu hlobo lwecebo luzonikeza inkampani isikhathi esanele sokwenza imali abayidingayo.
Abaholi bakahulumeni bavame ukwethembisa abantu ukuthi bazokwenza izinto ezinhle kakhulu. Kepha uma zingenzeki lezinto, abaholi abekho, njengoba iningi labantu likholelwa, bezama ukugwema ukwenza lokho abakuthembisile noma ukuzama ukuqamba amanga kubantu. Empeleni abakwazi ukwenza izethembiso zabo ukuthi zisebenze, hhayi ngoba lezi zethembiso zinkulu kakhulu, kodwa ngoba abaholi abaningi bakahulumeni kungenzeka bazi okuthile ngohulumeni kodwa hhayi kakhulu ngokuphatha. Ngakho-ke abanalo ulwazi lokuthi ukuhlela kwenziwa kanjani nokwenza amacebo abo ukuthi enzeke.
Kwabanye abantu, kubonakala sengathi ukuphupha iphupho elihle kuphela kwanele. Ngoba nje bephuphe ngalo, banomuzwa wokuthi kufanele manje kwenzeke. Bacasuka kakhulu lapho lokhu kungenzeki. Izizwe zonke, amabhizinisi namaqembu aqhubeke iminyaka eminingi nezindawo zawo edidekile futhi azinakho ukuhleleka ngoba amaphupho namacebo awo ayisisekelo awakaze abe iqiniso.
Ukuthi umuntu uhlela izinhloso ezinkulu, njengemisebenzi eminingi nemali eningi ngedolobha ahlala kulo, noma okuncane, njengokupenda indlu yakhe, amacebo ngeke afeze okudingekayo uma kunokuntuleka kolwazi lokuphatha.
Noma umuntu engazi ngemininingwane yezobuchwepheshe noma ukuthi angenza kanjani ngemali ayidingayo, noma engakwazi ukwenza abanye ukuba balandele imiyalo yakhe, noma ngabe amacebo akhe engacacile futhi acatshangwe kahle—ayikho kulokhu eyiqiniso izithiyo phakathi kokuhlela nokwangempela.